Su'aal ku saabsan galmada?
Author Topic: Su'aal ku saabsan galmada? (Read 14392 times)
« on: June 29, 2010, 09:15:10 PM »
waan ku salamay walaal marka hore wallala waxaan rabaa in aan ku wey diiyo su,aashaan ,
markii aan galmoonaayo hadii aan foorar u galmoodo ma wax dhibaato ah ayee ku keeni kartaa xaga uur qaadista mida kale Minka dhib ma u Geysan kartaa forarka , wallaal waxa aan karaa jwb faah faah san waad mahad santahay wallaal
Re: Su'aal ku saabsan galmada?
« Reply #1 on: July 05, 2010, 11:14:33 PM »
Wax saameyn ah kuma lahan uurqaadista iyo minkaba qaabka aad haweentaada ugu tagaysid.
suaal ku saabsan indhaha
« Reply #2 on: July 13, 2010, 07:38:31 PM »
SALAMU CALAYKUM WARAXMA
Wallaaladad iska xil saray inay dadkooda gaadhsiiyaan cilmiga Alle waxaan idiinka baryaya inuu jandiisa idin geyo
Su'aashaydu waxay tahay qofka isha uu kaga samysmo dhalaadka ama caadnka yari maxaa lagu daweyn
karaa ishase dhibaato ma soo gaadhsiin karaa hadaan wax laga qaban.
« Reply #3 on: July 17, 2010, 05:34:43 PM »
Halkaan ka akhriso qoraal ku saabsan caadka indhaha
Views: 8686 August 13, 2010, 03:34:13 PM
Views: 14015 October 27, 2012, 09:40:12 PM
Views: 10784 September 16, 2015, 02:20:23 PM
Views: 37630 January 01, 2011, 08:43:27 PM
Views: 11903 March 31, 2017, 07:43:12 PM